81:သန်းဝင်းကို တရုတ်လို ဘယ်အရာမဆို - Pandaily
Categories: Podcast ကိုRui Ma and Ying Lu ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 22, 2021 ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 23, 2021 မှာ Posted
First 81 ကို ဆက်၍ အသံပိုင်း စမ်းသပ်မှုများ ဆက်တိုက်လုပ်ဆောင်နေသော Major Core နှင့် Vington Business School မှ ပါမောက္ခ Carl Ulrich က သူ၏ “Win China” စာအုပ် မိတ်ဆက်ပွဲတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ သည်စာအုပ်ကို Wallon Business School က ကမ္ဘာ့သုတေသီတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Lele Sang က သေချာလေ့လာပြီးနောက် စီးပွားရေးအောင်မြင်မှုနဲ့ မအောင်မြင်မှုရှစ်ခုကို လေ့လာခဲ့ပြီး အမေဇုန်ကနေ မဟော်ဂနီမြို့တော်အထိ လေ့လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီဇာတ္လမ္းတြဲကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္ေန႔က Clubhouse app မွာ တိုက္ရိုက္ထုတ္လႊင့္ျပသခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
Tech Buzz နဲ့ အဆက်မပြတ်တွဲပြီး ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ စောင့်ကြည့်လို့ရပါတယ်၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ techbuzzchina.com မှာ စာရင်းသွင်းထားပါတယ်၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel မှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Inside Clubhouse group, @Techno Buzchina၊ ကျွန်တော်တို့ကို စာတွေရေး၊ နေရပ်လိပ်စာနဲ့ nbsp;@techbuzchina.com&nbspand Credit: [email protected]ေနာက္ၿပီးေတာ့ ထံုးစံအတိုင္း က်ေနာ္တို႔ ေထာက္ခံစာကို က်ေနာ္တို႔ website နဲ႔ pandaraily.com မွာ ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။
Buzz ရဲ့ feeling and feature ကို လိုချင်တယ်ဆိုရင် Karland Leles ကို အခမဲ့ book, empather & nbsp &Credit: [email protected].
အထူးကျေးဇူးတင်တဲ့ အဖွဲ့ထဲမှာ SupChina နဲ့ Pandaily, Bryce Ye, Kaiser Kuo နဲ့ Jason Macronald တို့ ပါဝင်ပါတယ်။ ငါတို့ အလုပ်ကိုကြိုက်ရင် ငါတို့ iTunes ကိုထားခဲ့ပါလို့ comment ပေးပါ! သူတို့တကယ်လုပ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စအတွက် ကျွန်တော်တို့အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်!